ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။
2 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:33 pm
အာ။ နက်ဖြန်ကို စိတ်မကူးပါနဲ့ဟ။
ဒီနေ့ပြီးနိုင်တာ ဒီနေ့လုပ်ကြမယ်လေ။ နော်။
နက်ဖြန်မှဆိုရင် အကုန် ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်မယ်။
မင်းလာလား မလာလားတော့ မသိဘူး။ ဒီနေ့ MZ လုပ်တာ ပွဲပျက်သွားတယ်နော်။ ငါတို့ အဲလို မဖြစ်စေနဲ့.
သေချာပေါက် နာမည်တက်ရမယ့် ကိစ္စမှာ နာမည်ကျသွားဦးမယ်။
3 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:33 pm
မနက်ဖြန်မနက် ၈ နာရီ ခွဲ အင်ဖိုတက်မှာတွေ့မယ်နော်။
အဓိကကတော့ ဒေါင်းလုပ်ဆားဗစ်ကို ကြော်ငြာမယ်။
နောက်တစ်ပတ် နေရင် ပေးမယ်။ ဒီပွဲကိုတက်တဲ့လူတွေကို ပို့စ်ရှိစရာမလိုဘူး ရှိတဲ့အထဲက လိုချင်တာယူ။
1 GB ပေးမယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုကြော်ငြာမယ်။ ကိုဇေက သကြားလုံးတွေဝယ်လာခဲ့ပါ။
ပြီးတော့ အားလုံးရဲ့ လိပ်စာကဒ်လေးတွေကောရိုက်မှာလား။အဲဒါကို ပြန်တိုင်ပင်ပါ့မယ်။
စာသားအကြမ်းကိုတော့ စွမ်းထက်ပဲဒီမှာတင်ပေးပါ။ ကျွန်တော်အခု လိုဂို ဆွဲနေပါပြီ။
4 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:34 pm
ဒါမှမဟုတ် ၇ ပေါ့
5 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:37 pm
၇ ခွဲကို အဆင်ပြေတဲ့သူတွေ Internet ရတဲ့နေရာမှာ ချိန်းပါမယ်။ (အဲအချိန် ဘယ်ဆိုင်ဖွင့်လဲ မသိဘူးရယ်)
လောလောဆယ် ပန်းဖလတ် စာကို ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ စီဘူးလေ။
ပန်ဖလတ် ပြီးမှ နောက်တစ်ဆင့် တက်မယ်။
မြန်မြန်လုပ်ပါ။ နေ့လည်စာဘဲ စားရသေးလို့ပါ။
6 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:38 pm
ပြီးတော့ လိုဂိုက အဆင်မပြေလို့ခင်ဗျာ။ မနက်ဖြန် အပြီးဆွဲပေးမယ်နော်။
ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ ဒီဆိုင်မှာ ဖိုတိုရှော့မရှိလို့ပါ
7 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:40 pm
အွန်...Paint နဲ့ဆွဲဗျာ...၇ ခွဲက ကျွန်တော်တော့ အဆင်ပြေတယ်...၆ ဆိုရင်တောင်အဆင်ပြေတယ်...
8 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:40 pm
မနက်ဖြန် MITR ကအဲဒီမှာပြောမယ်ဆိုတာကို ဖိုရမ်ရဲ့ Announancement ထဲမှာကြော်ငြာလိုက်မယ်နော်။
ရန်ကုန်က မန်ဘာအကုန်လုံး ကိုဖိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်လို့။
9 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:42 pm
နေဦးလေ...အစီအစဉ်ဆွဲပြီး မှ Announce လုပ်လေ... မြန်၂ လေး ဆွေးနွေးကြပါ...အချိန်မရတော့လို့ပါ...
10 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:42 pm
မနက်ဖြန် ၇ ကို တွေ့ဖို့ နေရာသတ်မှတ်ပေးပါ။ အင်တာနက်ရှိမှ ဖြစ်ပါမယ်။
မလာနိုင်တဲ့သူက ၈ နာရီ MICT ကို လာခဲ့ပါ
ဒါနဲ့ ခုပြောနေတာ ကျော်ကိုစိုး လား ဟာသလား
11 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:47 pm
12 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:48 pm
ဟိတ်ကောင်တွေ ကောင်တာပစ်တဲ့ ကောင်ကပစ် လုပ်ချင်တာ လုပ်တဲ့လူက လုပ်နဲ့.
13 တူတယ်။ on 23rd January 2010, 6:49 pm
z3r0c00l wrote: မနက်ဖြန် MITR ကအဲဒီမှာပြောမယ်ဆိုတာကို ဖိုရမ်ရဲ့ Announancement ထဲမှာကြော်ငြာလိုက်မယ်နော်။
တူတယ်။အားလုံးလူစုံလဲတွေ့ရတယ်။ဒါပေမယ့် MZ လိုဖြစ်သွားမှာစိုးတယ်။မနက်ဖြန် ဘယ်မှာချိန်းမယ်၊ဘယ်အချိန်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ကြမယ်။
နောက်တဆင့်က ကျွန်တော်သကြားလုံးဝယ်ခဲ့ဆိုတာ ဘယ်သကြားလုံးမျိုးဝယ်ခဲ့ရမလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ VC ရော၊လက်ကမ်းရောဝေစေချင်ပါတယ်။
လက်ကမ်းကတော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ MSG ကိုထည့်ပေးဖို့ပါ။ VC ကတော့ ဘယ်အချိန်မဆိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်အောင်လို့ပါ။
မနက်ဖြန်ကို မနက်စောစောမဆုံနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ FH1 & FH2 ရှေ့ အဆောင်(၄) ဘေးကမြတ်ခင်းပြင်ကနေမဖြစ်မနေစောင့်နေပေးစေလိုပါတယ်။
ဒါမှအားလုံးစုစည်းမိသွားမှာမို့လို့ပါ။မနက်ဖြန်က အင်အားပြရမယ့်ရက်လေ။ အားလုံး အစီအစဉ်တကျနဲ့ သင်္ကြန်ယိမ်းထွက်ကြတာပေါ့။ :dance :dance :attention
14 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:50 pm
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ၇ ရောက်မယ်...
15 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:53 pm
လောလောဆယ် အစီအစဉ်လုပ်ကြပါ။ မြန်မြန်လေး
ကျနော် အခု ဖျားနေပြီ။ အိမ်အမြန်ပြန်မှဖြစ်မယ်။
တော်ကြာ နက်ဖြန် မလာနိုင်မှာစိုးလို့။
16 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:54 pm
စွမ်းထက်၊ အတက်ကာ၊ ဟာသ အကြမ်းရေးပြီးတင်ကြလေ။
မနက်ဖြန် ၇ နာရီတွေ့မှာဘယ်သူတွေလဲ။
ကျွန်တော်က ၈ နာရီ လာခဲ့မယ်
လောလောဆယ် ဖိုရမ်မှာအနောင့်စ် လုပ်လိုက်တော့မယ်
မနက်ဖြန် (24.1.2010)(တနင်္ဂနွေနေ့) BarCamp Yangon ပွဲတွင် [You must be registered and logged in to see this link.]
Admin Team မှ ဆိုက်နှင့်ပတ်သတ်၍ Free Talk Show ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် MITR Forum မှ member များအားလုံးကို ဖိတ်ကြားလိုက်ပါသည်။
လို့တင်လိုက်မယ်။ စာသားမကြိုက်ရင် ပြင်ကြဦးနော်။
17 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 6:57 pm
ငိုချင်တယ်ငါမလာနိုင်ဘူး ဟီး :group
18 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:00 pm
CD ဝေဖို့ကိစ္စကတော့ လွယ်မယ်မထင်ပါဘူးအတက်ကာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လကုန်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်လဲပိုက်ဆံမရှိပါဘူး
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအားလုံး၏ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်နေရာတစ်ခုနှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အသိပညာဗဟုသုတများကို ဖလှယ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ြ့ပီးတော့ ဆိုက်ကို့ပရင်တာက ဘာလဲ။ ယူလာလို့အဆင်ပြေလား။
ပြေတယ်ဆိုရင်တစ်နေရာရာမှာ သွားပြီး ပရင့်ထုတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
ပြောသာပြောရတယ်။ ပြေမယ်တော့မထင်ပါဘူး။ ယူလာလို့ ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ။
19 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:05 pm
CD ကိစ္စ ငါကန့်ကွက်တယ်.... ငါတို့မှာ CD burn ဖို့ အချိ်န်မလောက်ဘူး...ငါတို့ စက်တွေက အဲ့လောက်ကြီး မကောင်းဘူး...တစ်ခွေတစ်ခွေကိုအကြာကြီး burn ရမှာ
1 GB ဆိုရင်တောင်အချိန်အတော်ကြာမှာ....Mb နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်တယ်...
20 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:07 pm
Kyaw Ko Soe wrote: လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ၇ ရောက်မယ်...
٨††∂¢қєř wrote: ပန်းဖလက်ရိုက်တဲ့နေရာမှာ တစ်ချို့စာသားတွေ ထည့်ချင်ပါတယ်။ အဲဒါကလည်း ရိုက်နေရင်း စီနေရင်းနဲ့ပြောမှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာတွေကတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စာစီမယ် ၊ ပြီးမှ တစ်ခါတည်းထုတ်ပါ။ ဒီကိစ္စအတွက် လိုမယ့် printer ၊ toner တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါသလဲ။ ???
အဲဒါကြောင့်ပြောတာလေ။ ငါအိမ်မှာ ရိုက်ခဲ့မယ်။ အခု စာစီပေး။ ပြီးရင် ထုတ်ခဲ့ပေးပါမယ်ဆို။
Visiting Card ပုံစံလုပ်မယ်ဆိုတာ သေချာပါသလား ။ လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့
Myanmar IT Resources
The Best Forum for All IT Resources
site Link ပါထည့်ရမယ်။
٨††∂¢қєř wrote: Information Technology Resources for Portal Users လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ဝေရုံပါပဲ။ ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူလုပ်မှာလဲ။
အဲလိုကြီးက မှားနေတယ်။ English မှားနေတာ။ ငါပြောရင်လည်း စိတ်ဆိုးဦးမယ်။ တခြားဟာ စဉ်းစားဦး။
တတိယ ကလိုမယ်ထင်တဲ့ ဘုစုခရုပစ္စည်းအကုန်ယူလာရပါမယ်။ ဥပမာ ကော် ၊ ကတ်ကြေး ၊ ဓါး ၊ ဆော့ပင် ၊ စာရွက် ( အရောင်နှင့် ) ၊ ဘောပင် ၊ ခဲတံ ၊ ပေတံ ၊ခဲဖျက်
နောက်တစ်ခုက လိုဂိုက ဘာလုပ်ဖို့ပါသလဲ ??? အကျီဆင်တူတော့ မလုပ်နဲ့ ၊ ပိုက်ဆံကုန်လိမ့်မယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ တက်မယ်။ bar camp အကျီနဲ့ပဲ။
ဖိုရမ်တစ်ခုမှာ လိုဂိုဆိုတာ ရှိရတယ်။ အကျီဝတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဟ။ ဘားကန့် အကျီနဲ့ဆိုတော့ နင်လာတယ်ပေါ့။
CD ဝေပါမယ်။ အထဲမှာပါမယ့် data က ၊ Computer journal ဖြစ်ဖြစ် ၊window cd ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးမယ်လို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ခွေ ၅၀ ဘူးဝယ်ရမယ့်ပုံပေါ်တယ်။ အပေါ်မှာ ဆော့ပင်နဲ့ ဖိုရမ်နာမည်ကိုရေးမယ်။
ပိုက်ပိုက် ဘယ်လောက် ကုန်မှာလဲ??? ကွန်ပြူတာဂျာနယ်ကို ဝေရင်တော့ ကိုယ့်ဟာမဟုတ်ဘဲ ဝေတယ် ဖြစ်မယ်နော်။
ကိုယ့်ဖိုရမ်က Product တစ်ခုခုကို ဝေပါလား
တစ်ခြားဘယ်သူဘာတွေထပ်ဖြည့်ချင်လဲ။ မဖြည့်ချင်ဘုးဆိုရင် ဘယ်ဟာကို ဘယ်အချိန်မှာ အပြီးလုပ်မယ်ဆိုတာကို တိုင်ပင်ပါမယ်။
နောက်တစ်ခုက မနက်ဖြန် ပိုက်ဆံ အများကြီးယူလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လကုန်ရက်ရောက်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ထားပေးရင်ပေးပါ။ လကုန်ရင်ပေးပါ့မယ်။
21 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:10 pm
အားဟား...M I T R Mailing software ယူခဲ့....လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ သံလမ်းမှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးရင် info ကိုဝင်တဲ့လမ်းထိပ်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိတယ်... ဆိုက်ကားဂိတ်နဲ့တည့်၂ ပဲ...
22 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:11 pm
ငါးသောင်းဆိုရင် တစ်ယောက်ဘယ်လောက်မှပြန်မကျပါဘူး တစ်ယောက် ၁ သောင်းလောက်ပါအောင်ယူခဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်...(ပြောမယ့်သာပြောရတာ စည်းစိမ်က ၁ သောင်းမပြည့်ဘူး )
23 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:14 pm
Kyaw Ko Soe wrote: အားဟား...M I T R Mailing software ယူခဲ့....လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ သံလမ်းမှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးရင် info ကိုဝင်တဲ့လမ်းထိပ်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိတယ်... ဆိုက်ကားဂိတ်နဲ့တည့်၂ ပဲ...
MITR Mailing Software က ပြန်ပြင်ဖို့ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ မြန်မာက သုံးလို့မရသေးဘူး။
သံလမ်းက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ၇ နာရီနော်
24 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:15 pm
ဒါဆို CD burn ဖို့က စွမ်းထက် စက်နဲ့ငါ့စက်ရှိတယ်.....စွမ်းထက် စက်ကို Virus ရှင်းထားပါ...ငါက Format တီးထားတာ ကိစ္စမရှိဘူး...နောက်ပြီး အတက်ကာရေ မင်းအိမ်က CD တွေ ယူခဲ့ပါ....ဘာကိုပေးမလဲ ဆိုတာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာညှိလို့ရတယ်...ပန်းဖလက် ကိစ္စပြတ်ပြီးရင် ပူစရာမလိုတော့ဘူး...နောက်ပြီး ဘယ်သူက တက်ပြောမှာလဲ စွမ်းထက်ပဲလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူပြောမှာလဲ?
25 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:18 pm
1 - Site Logo & Link
2 - Service တွေအကြောင်းနဲ့ ဖိုရမ် မှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာ တိုတိုနဲ့ထိထိမိမိ ရေးမယ်...
3 - နောက်ပိုင်းလာမယ့် Service တွေအကြောင်းထည့်ရေးလိုက်မယ်...
ဘာထပ်ဖြည့်ချင်ကြသေးလဲ သိပ်တော့ ဆံ့မှာမဟုတ်ဘူး...
26 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:18 pm
စီဒီ ဝေဖို့ကိစ္စကတော့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။
လာတဲ့သူတွေကို ဖိုရမ်မှာ ပို့စ် ရှိစရာမလိုပဲနဲ့ လိုချင်တာကို 1 GB Free နောက်တစ်ပတ်နေရင် ပေးမယ် ဆိုတာမျိုး ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်ဆိုက်ကမဆိုပေါ့။ Rapid Share တွေပါဘာတွေပါအပါပေါ့။
လောလောဆယ် Downloading Service ကို အဓိက ထားပြီး ပန်းဖလက်ထဲမှာထည့်မယ်လေ။ နော်။ မကောင်းဘူးလား
27 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:18 pm
٨††∂¢қєř wrote: cd ခုတ်တာက မကြာပါဘူး။ အဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ cd ပေးတော့ လူတွေရဲ့ attraction ကိုပိုရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သိကြားလုံးနဲ့ စာရွက်နဲ့ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ကွန်ပျူတာဂျာနယ်ကိုပေးတာကလည်း သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး။ ငါတို့က ဒီလိုပဲ ရှယ်လုပ်နေကြတာပဲ ၊ အဲဒါမကြိုက်ရင် hacking tut တွေဝေမလား ။cd ပေါ်မှာ ဖို၇မ်နာမည်ရေးတာကြောင့်လည်း ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါ။
အင်း Computer ဂျာနယ် ပါတော့လည်း မဆိုးပါဘူး။ Hacking Tut တွေက ဒေါင်းထားလို့လား။
٨††∂¢қєř wrote: လိုဂိုက အရေးတော့ သိပ်မကြီးသေးပါဘူး။ အဆင်မပြေရင်ရှေ့ဆုံးက တစ်ခြားဖိုရမ်မှာ ဖော်ပြပေးဖို့ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဟာလေးပဲ ခဏပေးလိုက်ပါ။
projector ရှိလား ၊ ထိုးပြရမှာလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ငါတို့ရဲ့ category တွေကို jpg နဲ့လုပ်ပြီးပြလို့ရတယ်နော်။ အဲဒါရောလုပ်မှာလား။
Projector ရှိတယ်။ ငါလည်းပြောမယ်။ မင်းလည်းပြော။
power Point လုပ်ရဦးမယ်။
Category တွေကော Forum Page တွေပါ Print Screen ဖမ်းရမယ်
28 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:21 pm
٨††∂¢қєř wrote: ပါမယ့်အကြောင်းအရာတွေက အရေးမကြီးဘူး။
ပန်းဖလက် ၊ စီဒီ ၊ ဗီစီ ၊ သိကြားလုံး ၊ ပရယ်ဇယ်တေးရှင်း ပါမှာလား။
နောက် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ယူလာကြမလဲ ၊ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်သုံးမလဲ ၊ အရေးကြီးတာကိုပြောပါ။ ဟိုရောက်မှ ပိုက်ဆံမလောက်ရင်တိုင်ပါတ်မှာနော်။ သတိထားအုံး
အဲ ခုက ပရယ်ဇန် တေးရှင်းလုပ်ဖို့ ပြောနေကြတာလေ။
အဲဒီ့ ပရယ်ဇန်တေးရှင်းကို လာကြည့်တဲ့သူများအောင် လုပ်မလို့။
29 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:23 pm
၁ သောင်းပါမယ်...ကားခတော့ ချီးငှားပြန်ရမှာပဲ
30 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:23 pm
Kyaw Ko Soe wrote: 1 - Site Logo & Link
ပန်းဖလက်မှာက အဲဒီလောက်ရေးဖို့မလိုဘူး ဟာသလေး။
ပြီးတော့ cost ကိုတတ်နိုင်သလောက်ချုံ့ရမှာဆိုတော့ ပန်းဖလက်ကို $ƴǩǾ ပဲတစ်ခါတည်းထုတ်ခဲ့လိုက်ပါလား။စာရွက်ဖိုး ဆိုရင် A4 တစ်ထုတ်ဆိုရင် 2700 လောက်ပဲရှိမယ်။
ဒါဆိုရင် 50000 ကနေ အများကြီးလျော့သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပိုက်ဆံမရှိဘူး။
လကုန်ရင်လဲ ပေးရမှာတွေရှိသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့်။ ပြီးတော့ ဒီလ Dollar ဈေးကျတယ်လေ။ မလွယ်ဘူး။
CD ကိုလဲ 50 ကို 7500 တန်လောက်နဲ့ပဲကူးမယ်။ ကူးတာက ကိုယ့်စက်နဲ့ကိုယ်ဆို ရှော့မရှိဘူး။
ဒါဆို သိပ်မကျတော့ဘူး။ Cost ကိုတတ်နိုင်သလောက်ချုံ့ကြရအောင်ပါ။ ပန်းဖလက်နဲ့ လိပ်စာကဒ် (ဝေမယ်ဆိုရင်) ကိစ္စကို $ƴǩǾ ပဲတစ်ခါတည်းလုပ်လာစေချင်ပါတယ်။ အဓိကကုန်မှာ အဲဒါဖြစ်လို့ပါ။
31 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:24 pm
٨††∂¢қєř wrote: ဟက်ကင်းတွေ ကအစောကြီးကတည်းက ရှိတယ်။ ပြောပါ ။ အခု စီဒီကိုပယ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ပယ်မှာလား။ နောက်မှ ပေးမယ်ဆိုရင် လာယူရမှာနဲ့ ၊ တိုင်ပတ်မှာဆိုးလို့ ၊ နောက်မဆိုင်တဲ့သူတွေ ၊ bar camp ကလူတွေကိုရော ဘယ်လိုလုပ်မှာလည်။
အရေးကြီးတာကို အတည်ပြုပါ။ အတည်ပြုပြီးရင် ကျန်တဲ့ ကိစ္စ ကို ဆက်ပြောပါ့မယ်။ ပိုက်ဆံကိုတိုင်ပင်ရပါမယ်။
ဘားကန့် လာတဲ့သူတွေကို တစ်ခုခုတော့ ပေးမှ ငါတို့ပြောတာ နားထောင်ကြမှာ။
DS ကို ပိုစ့်မတင်လည်း ပေးမှာမျိုးလုပ်ကြမလား
32 မပူပါနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ on 23rd January 2010, 7:25 pm
အဲဒီစာသားမျိုးကောင်းတယ်။ပရင်တာက အဲဒိမှာလဲထုတ်ပေးတဲ့နေရာရှိတယ်။ CD/DVD လဲ ဘန်းပေးတယ်။
FH1 &2 ကြားမှာဒီနေ့တွေ့ခဲ့တယ်။မနက်ဖြန်တော့မသိဘူး။နောက်ပြီးအဲဒီနားမှာပဲ ပရင်တာထုတ်တာရှိမှာပါ။
33 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:26 pm
၁- ပန်ဖလတ် ဆိုပြီး ထိုးခဲ့ပါတယ်။
34 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:26 pm
ငါတို့ ရဲ့ Presentation ကိုလာတဲ့သူတွေကိုပဲဝေပေါ့..ဝေမယ့်အကြောင်းကို Pan မှာထည့်ရေးလိုက် ဒါပေမယ့် limit ကန့်လိုက် ဘယ်နှစ်ခွေ ဘာညာပေါ့
35 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:29 pm
36 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:29 pm
٨††∂¢қєř wrote: ပန်းဖလက် ၊ သိကြားလုံး ၊ ဗီစီ ၊ စီဒီ ၊ ပရယ်ဇယ်တေးရှင်း အဆင်ပြေပြီလားပြောကြ။ အတည်ပြုမှာလား။ လုပ်ချင်ရင် ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲ။
ပန်ဖလတ် အကြောင်း စဆွေးနွေးပေးပါ။
ကျနော် အိမ်မှာ စာစီ တစ်ခါထဲ ထုတ်ပေးလို့ရရင် ထုတ်ခဲ့ပါမယ်။
37 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:30 pm
CD ပေးရင် သကြားလုံးမပေးဘူး။
အခုဟာက ကျွန်တော်တို့က မားကတ်တင်းဆင်းသလိုဖြစ်နေတယ်။
ပန်းဖလက်၊ လိပ်စာကဒ်၊ သကြားလုံး၊ စီဒီ အများကြီးပဲ
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က CD ဝေဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ဆိုက်ကဟာမဟုတ်တာကို ဝေရင် တခြားဆိုက်တွေက တွေ့ရင် ရယ်စရာကြီး။ ကိုယ့်လက်ဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူး။ ပြောကြမှာစိုးတယ်ဗျာ။
CD ကိုတော့ သဘောမတူချင်ဘူး။ ကျန်တာအားလုံးသဘောတူပါတယ်။
38 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:32 pm
အာ။ နင့်စိတ်ကို လျှော့။
အဲဒီ့ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲတတ်တဲ့ အကျင့်လေး ပြင်ဦးကွာ။ နို့မို့ဆို တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်နဲ့ ပြဿနာ တက်ဦးမယ်။ ငါတို့ ချင်းတက်တာက ကိစ္စရှိဘူး။ မင်ဘာတွေနဲ့တက်မှာစိုးလို့
39 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:34 pm
40 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:35 pm
ငါလည်း ပယ်တယ်...အချိ်န်ရယ်...ငွေရယ်...နောက်ပြီး ကိုယ့် Forum product မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့...
41 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:35 pm
တူတယ်ဆိုတာက အပေါ်ဘက်က ကိစ္စကိုတူတယ်...CD ကိစ္စတော့ ပယ်တယ်...
42 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:38 pm
ကျန်တာတွေက ငါတို့မလုပ်နိုင်စရာမရှိတဲ့အတွက် သဘောတူပါတယ်...CD ကိစ္စကတော့ လူမစွမ်းနတ် မ မှပဲရမယ်....ငါတို့ စက်တွေလည်း အဲ့လောက်ကူးနိုင်မယ်မထင်ဘူး....
43 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:41 pm
Last edited by Хакер-истребитель on 23rd January 2010, 7:44 pm; edited 1 time in total
44 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:43 pm
45 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:45 pm
ကိုထက် ကို မစောင့်နဲ့တော့လေ။
သူက ဒီပိုစ့်ကို သိတောင် သိပါ့မလား။
46 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:46 pm
ွှTime ( ) - ( )
Room No. ( )
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာအိုင်တီလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်မှ Free Talk Show ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအားလုံး၏ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် နှင့်
၃။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အသိပညာဗဟုသုတများကို ဖလှယ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
47 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:48 pm
٨††∂¢қєř wrote: ဒါဆို မင်းပရင်တာက ယူလာမှာလား တိုနာတွေကရော
အာ။ နင်က နက်ဖြန်မှ လုပ်ချင်နေတာလား။
ပရင်တာ ယူလာတော့ကော ၊ ဘယ်နားသွားထုတ်ရမှာလဲ
48 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:49 pm
၂၂၀ ဘက်ထရီကြီးပါမလာရမယ့်ပုံပဲ (just kidding)
49 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:50 pm
z3r0c00l wrote: ဟုတ်ပါတယ်..
ပန်ဖလတ်က တကယ်တော့ ရှည်ရှည်လေးလုပ်ရမယ်ထင်တယ်။
50 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။ on 23rd January 2010, 7:51 pm
51 Re: ကဲကဲ ဒီမှာ မနက်ဖြန် အကြောင်းပြောမယ်ဗျို့။